सभासद र नार्क कार्यकारी निर्देशकबीच चर्काचर्की – Newsagro.com :
सभासद र नार्क कार्यकारी निर्देशकबीच चर्काचर्की
August 25, 2015 August 26, 2015 NewsAgro0Comments agriculture newsagro.com, Narc, Nepal, Yamrj Pandey, डा. यमराज पाण्डेय Dr
यो समाचार 905 पटक पढिएको
नार्क भर्ति केन्द्र : सभासद, दलले भर्ति केन्द्र बनायो : निर्देशक
काठमाडौं, ८ भदौं /नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क) का कार्यकारी निर्देशक डा. यमराज पाण्डेयले नार्कलाई राजनीतिक नेतृत्व वर्गले भर्ति केन्द्रको अखडा बनाएको बताएका छन् ।
‘नार्कलाई भर्ति केन्द्र पनि तपाईहरुले बनाउने, विशेष सुविधा पनि केही नदिने, सौतेनी व्यवहार पनि गर्ने, अनि राम्रो काम गरेन भनेर गुनासो पनि तपाईहरुले नै गर्ने ? यो न्याय होइन,’
-डा. यमराज पाण्डेय
कार्यकारी निर्देशक, नार्क
व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले सोमबार आयोजना गरेको नार्कसम्बन्धि बैठकमा निर्देशक डा. पाण्डेयले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । पछिल्लो १० बर्षमा नार्कले गरेका उपलब्धीहरुको बारेमा छलफल गर्न डाकिएको बैठकमा निक्कै बेरसम्म सभासद, कृषि बिज्ञ र कार्यकारी निर्देशकबीच चर्काचर्की चलेको थियो ।
सभासद र कृषि बिज्ञले नार्क भर्ति केन्द्र बनेको व्यापक गुनासो गरिरहँंदा डा. पाण्डेयले राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले नार्कलाई भर्ति केन्द्र बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने अखडा बनाएको आरोप लगाए ।
‘म स्वीकार गर्छु नार्क भर्ति केन्द्र बनेको छ । राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ति गर्ने नार्कको आफ्नो हैसियत छैन,’ डा. पाण्डेयले भने,‘बरु तपाई सभासदसहित तपाईका राजनीतिक दलले भर्ति केन्द्र बनाएको हो ।’ उनले नार्कलाई राजनीतिक दलको हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन समितिका सभासदहरुलाई चुनौती पनि दिए । उनले भने,‘म नार्कलाई पूर्ण रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन चाहेको छु । राजनीतिक हस्तक्षेपको जालो तोड्न चाहन्छु । तर के तपाईहरु मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?’
नार्कमा आफुखुशी अपारदर्शी प्रकृयाबाट कर्मचारी भर्ना गरिएको सभासदहरुको गुनासोमा निर्देशक पाण्डेयले आफु कार्यकारी निर्देशक भएपछि लोकसेवा आयोगको सहकार्यमा विधिसम्मत् प्रकृयाबाट कर्मचारी भर्नाको प्रकृया अघि बढाइएको दाबी गरे । उनले भने,‘कर्मचारी भर्नामा धाँंधली भएको छ भने तपाईहरुले प्रमाणसहित भन्न सक्नुपर्छ । हावाको भरमा आरोप लगाउन पाइदैंन् ।’
राज्यले कृषि बैज्ञानिक र नार्कलाई सौतेनी व्यवहार गरेको जानकारी गराउदै उनले बैज्ञानिकलाई कुनै सुविधा नदिएर १० देखि ५ बजेसम्म सरकारी कर्मचारीजस्तो खटाउन नसकिने बताए । प्रविधि विकासका लागि तथा विदेशिने बैज्ञानिकलाई स्वदेशमै राम्रो वातावरणमा काम गराउन राज्यले बिशेष प्रकारको सुविधाको व्यवस्था गर्न नसकेको उनको ठहर थियो । ‘नार्कलाई भर्ति केन्द्र पनि तपाईहरुले बनाउने, विशेष सुविधा पनि केही नदिने, सौतेनी व्यवहार पनि गर्ने, अनि राम्रो काम गरेन भनेर गुनासो पनि तपाईहरुले नै गर्ने ? यो न्याय होइन,’ उनले भने । असमान व्यवहार र वातावरणमा नार्कले काम गर्न नसक्ने बताउदै उनले परिषदलाई बिगघन गरेर बिभाग वा स्वायत्त बनाइनुपर्ने मागसमेत गरे ।
नार्कले आफुले विकास गरेका ६८ प्रकारका कृषिसम्बन्धि प्रविधि कृषि विभागका कारण किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको दावी गरेको छ । कृषि प्रविधिको प्रसारको जिम्मेबारी कृषि बिभागको भएको जानकारी गराउदै उनले प्रसारको बिषयमा बिभागसँंग जानकारी लिन सभासदहरुलाई आग्रह गरे । त्यसैगरी सरकारको उच्च नेतृत्ववर्गबाट सहकार्य नहुँंदा नार्कले चाहेर पनि हालसम्म डिम कृषि विश्व विद्यालय स्थापना गर्न नसकेको नार्कले जनाएको छ ।
त्यसअघि प्रोफेसर कैलाशनाथ प्याकुरेल, पूर्व सचिबद्वय डा. हरि दाहाल र डा. नरवहादुर रजवार, कृषि बिभाग पूर्व महानिर्देशक खेमशर्मा पौडेल, पूर्व सहसचिब रामप्रसाद पुलामीलगायतकाले नार्कलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रुपमा मुक्त गर्नुपर्ने, नार्क र बैज्ञानिकको हौसला प्रदान गर्न समय सुहाउँंदो सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, नार्कले किसानलाई आवश्यक पर्ने खालका प्रविधि विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सभासद् कमल पंगेनीले लोकतन्त्रको अभ्याससँंगै नार्कमा कार्यकारी नियुक्तिदेखि तल्लो निकायको कर्मचारी भर्नासम्म कृषि मन्त्री र कृषि सचिबको प्रभावमा हुने गरेको आरोप लगाए । पछिल्लो १० बर्षमा ६८ बटा प्रविधि विकास गरेर नार्कले जस लिन नहुने भन्दै अर्का सभासद काशिनाथ अधिकारीले ६८ वटा प्रविधिसँग किसान लाभान्वित हुन पाए वा पाएनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताए । सभासद आनन्द पोखरेलले बैज्ञानिक र कर्मचारी काम गरेर थाकेको बताएपनि नतिजामुखि प्रतिफल राज्यले नपाएको दावी गरे । उनले नार्क पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलको खेताला बनेको आरोपसमेत लगाए ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिब उदयचन्द्र ठाकुरले कृषि अनुसन्धान नीति तत्काल तयार पारेर मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन नार्कलाई आग्रह गरे । समितिका सभापति गगन थापाले नार्कलाई प्रभावकारी बनाउन बिनियम, कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन तत्काल संशोधन गरेर समय सुहाउदो तयार पार्न नार्कलाई निर्देशन दिएका थिए ।
पूर्व कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. दिलवहादुर गुरुङ्गलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि रिक्त भएको पदमा बरियता मिचेर आफु निकट मानिएका डा. पाण्डेयलाई नियुक्त गरेको भन्दै तत्कालिन समयमा सबैतिरबाट मन्त्री पराजुलीको आलोचना भएको थियो ।
← गाईपालकले पाउँछन् बर्सेनि लाखौं
किसान मार्दै डिडिसीले →
यो समाचार 31756 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 31412 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 22848 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 3749 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले